China Mineral Fiber Ceiling BC004 fekitori uye Vagadziri | Beihua
Iyo mineral wool board board inogona kuvandudza mashandisirwo emagetsi asina kunatswa masosi, kusimudzira kugona kwechiedza cheiyo yese magetsi taa, kuderedza kupenya uye mimvuri, uye kuita kuona kwakasununguka.
Inoshandisa machira emvere kuti ndiyo huru mbishi yekugadzira, iyo mineral wool yakagadzira micropores yekudzikisa mutsindo wave kutarisisa, kubvisa echo, uye kuparadzanisa ruzha runopasirwa pasi.
Iyo inonzwika kunyorera inoshanda NRC iri pamusoro pe 0.5, iyo inogona kusimudzira kushanda kwechivakwa, kuvandudza nzvimbo yemagariro echivako, uye kugadzirisa hupenyu hwevanhu. Yakakodzera zvirongwa zvehunyanzvi zvakaita senge zvivakwa zvehofisi, mahotera, zvipatara, mabhangi, matare, zvikoro uye nezvimwe zvinzvimbo, migwagwa yeruzhinji, masheti makuru, dzimba dzebhizinesi, wadhi, dzimba dzekushandira, dzimba dzematare uye zvimwe zvirongwa zvehunyanzvi, pamwe nemakamuri ekugamuchira. mahofisi, makamuri emisangano uye dzimwe nzvimbo dzinoshongedza zvakapetwa.
Noise yekuderedza coefficient NRC ndeye yakakwana yeongororo index iyo inoyera kugona kwekupinza kugona kwechimwe chinhu munzvimbo yakavharwa. Iyo yakakwira iyo NRC, kuderera kurira kunoratidzwa kudzoka kunzvimbo. Kusiyana neizvozvo, ruzha runogara ruchiratidzwa mudenga kuti riumbike, zvichikonzera ruzha rwemashure. Nekuda kwekuona kwe nzeve yemunhu, kana chete iyo NRC ichisvika 0.5 kana kupfuura, nzeve yemunhu inogona kunzwa kuderedzwa kwakanyanya kurira. Miedzo yakaratidza kuti miviri yakavhengana-inotora muviri, sekunge mapaneru anogadzika emumaminerari, uye mapanera esimbi ane mutserendende anonamira kumashure ane mutsindo unonzwika wekubata. Mapaneru anobata inzwi seasina porous gypsum board, calcium silicate board uye simbi bhodhi zvine zvingangoita zvine mutsindo. Panous inonzwa inotora magadzirirwo akadai seyegoridhe jasi mapuranga haite zvakanaka kune dzakaderera-frequency ruzha.
Iyo ruzha yekuderedza ruzha inokwana NRC yakakosha kune chero nzvimbo yakavharirwa. Iyo nguva yekudzoserwa uye huwandu hwe ruzha hunoda kufungwa munharaunda dzinotevera.
Yakavharwa hofisi, imba yekusangana
Kuvhura / kuvhara akavhenganiswa office office
Lobby, nzvimbo yebasa
Kirasi / yekudzidzira nharaunda, nzvimbo yekumhanyisa, nzvimbo yekudyira
Nzvimbo yekurapa, yakadai se: horo yekutambira, imba yekubvunza, hofisi yechiremba, nezvimwe.
Nzvimbo yekutengesa, imwe nzvimbo yevatengi yekushandira, nezvimwe.
Yepfuura: Mineral Fiber Ceiling BH003
Inotevera: Mineral Fiber Ceiling BH002